Puntland: Waan ka hortegaynaa doorashooyinka Somaliland ee Sanaag & Hayland (Dhegayso). – Radio Daljir
Nofeembar 26, 2012 1:42 b 0
Garoowe Isniin Nov 26, Wasaaradda amniga Puntland oo ka hadashay doorashooyinka Somaliland ee lasoo sheegayo inay kusoo fool leeyihiin gobolada Haylan iyo Sanaag, ayaa sheegtay in ciidamada amaanku ka hortagayaan isku dayga Somaliland ku doonayso inay doorashooyinkeeda kaga hirgeliso gobolka Sanaag & Dhahar.
Wasiir kuxigeenka Wasaarada amniga Dawlada Puntland Md Cabdijamaal Cismaan Maxamed oo waraysi siiyey Radio Daljir waxaa uu ku sheegay in Dawlada Puntland talaabo ka qaadayso maamulka Somaliland hadii ay isku dayaan inay Doorashooyinkooda keenaan gobolka Sanaag iyo Hayland.
“Hadii la isku soo duulo waa la dagaalamayaa umana dulqaadanayno dhul boobka Somaliland dalkayaga iyo dadkayagana waan difaacanaynaa” ?Ayuu yiri Cabdi Jamaal Cismaan Wasiir kuxigeenka amniga Puntland.
?C/jamaal Cismaan ayaa beeniyay ciidamo Somaliland katirsan oo la sheegay inay soo gaareen degmooyinka Laasqoray iyo Baran oo ka tirsan gobolka Sanaag waxaana uu sheegay in halkaasi ay Puntland ku sugan tahay.
Cabdi Jamaal Cismaan oo Daljir weydiisey wararka sheegaya in Puntland ciidamo badan geysey Dhahar ayaa sheegay in halkaasi ay u tageen difaaca deegaankoodda.
“Dahahar hadda anaa jooga Dawlada Puntland go’aan ayay qaadatay dad reer Puntland waxaan u sheegaynaa waxaa jira handedaad la idinku hayo marka dadka duulaanka ku ah qaranimadiina iska difaaca” Cabdi Jamaal Cismaan.
Degmada Dhahar ee gobolka Hayland waxaa xiligan ka jira dhaqdhaqaaqyo xoogan oo u muuqda saansaan colaadeed oo halkaasi ka aloosma, Maamulka Somaliland ayaa sheegay inay sanaadiiqda codbixinta geynayaan halkaasi iyadoo Dawlada Puntland ciidamo badan geytey halkaasi.